स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > शिक्षा > स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका जिल्लाका केही विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कक्षा सञ्चालन गरेका छन् ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालयको पठनपाठन शुरु गरेका हुन् ।
पठनपाठनशुरु गरेको शान्ति निकुञ्ज माध्यामिक विद्यालय कावासोतीका प्रधानाध्यापक हरि न्यौपानेका अनुसार कक्षा ६ देखि माथिका कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।
साना बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन असहज हुने भएपछि ६ कक्षाभन्दा माथिका कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।कक्षा ६, ८ र १० का विद्यार्थी आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार विद्यालय आउँछन् । कक्षा ७, ९ र १२ का विद्यार्थी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार आउँछन् । कक्षा ११ को भने पठनपाठन शुरु नगरिएको उनले जानकारी दिए।
२०७७ असोज १० गते १६:३३ मा प्रकाशित
शनिबार थपिए १२ सय ७ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित, अहिलेसम्म कति पुगे ?
सस्तियो सुन, आज मूल्यमा भारी गिरावट !
सेयरमा आज इन्स्योरेन्सको दबदबा, शिखरको धेरै कारोबार, एनबीले कमायो ९ प्रतिशत !